बेलायत भ्रमणका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा | Jukson
बेलायत भ्रमणका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा
काठमाडौं, २० असार– बेलायत भ्रमणका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले तोकेको छनौट समितिले टोलीको घोषणा गरेको हो । नेपाल क्रिकेट संघ क्यान निलम्बनमा परेपछि आईसीसी आफैंले टिम हेरिरहेको छ । र, नेपाली टोली टिम छनौटका लागि प्रशिक्षक जगत टमाटा, कप्तान पारस खड्का र आईसीसी प्रतिनिधि राजु बैंकटपति रहेको टिम बनाइएको थियो ।
छनौट समितिले सोमबार १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ । टोलीमा सुवास खकुरेल र अनिल मण्डलले पुनरागमन गरेका छन् भने नयाँ अनुहारका रुपमा विक्रम शोव आएका छन् । सुवास र अनिल ब्याट्सम्यान हुन् भने विक्रम मिडियम पेश वलर हुन् ।
टोलीका अन्य सदस्यमा ज्ञानेन्द्र मल्ल, शक्ति गौचन, बसन्त रेग्मी, शरद भेषावकर, सोमपाल कामी, सागर पुन, विनोद भण्डारी छन् । यस्तै करण केसी, सन्दिप लामिछाने, राजु रिजाल र राजेश पुलामी मगर पनि टोलीमा परेका छन् । यसअघि टोलीमा रहेका ब्याट्सम्यान नरेश बुढायर र बल सुशन भारी भने बाहिरिएका छन् ।
नेपाली टोली असार २७ गते (११ तारिख) बेलायत जानेछ र, १९ तारिखमा मेरिलोबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीसँग लर्डस्मा खेल्नेछ । अन्य स्थानीय टोलीसँग खेल्ने तय भएको छ ।
युरो कप फुटबलको सेमिफाइनल समिकरण पूरा : कुन खेल कति बेला?
फ्रान्सका खेलाडी तयार छन् जर्मनीलाई हराउन !
यी बलिउड कलाकारका सन्तानले गर्दैछन् २०१८ मा डेब्यू
UPDATE : रसुवामा बस दुर्घटना, ३० जनाको मृत्यु
सराङ्गकोट खोज पत्रकारीता पुरस्कार प्रेम नेपालीलाई
निर्माणाधीन हाइड्रोपावरले कर तिरेनन्
लाप्राक र बारपाकमा १५ लाखको खाद्यान्न ( सहयोगी संस्था घान्द्रुक समाज हङ्कङ र जपान )